အရက်မူြး ပီး ငွေ တစ်သိန်း နဲ့ လိုက်ရောင်း နေတဲ့ ရှစ်လ အရွယ်သမီးငယ်လေး ကို ကယ် တင် ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Shwe Ba
Homepage / Celebrity / အရက်မူြး ပီး ငွေ တစ်သိန်း နဲ့ လိုက်ရောင်း နေတဲ့ ရှစ်လ အရွယ်သမီးငယ်လေး ကို ကယ် တင် ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
အရက်မူြး ပီး ငွေ တစ်သိန်း နဲ့ လိုက်ရောင်း နေတဲ့ ရှစ်လ အရွယ်သမီးငယ်လေး ကို ကယ် တင် ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
မိဘမဲ့ က လေးပေါင်း များစွာ ကို ရင်အုပ် မကွာ စောင့်ရှောက် ပေးနေ တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ နေရာအခက်အခဲကြောင့် ကလေး(၃၀) ကျော် မွေးစားပြီးချိန် မှာ ပဲ ထပ်ပြီးလက်မခံတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် လတ်တလောကာလမှာတော့ ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ မိဘ ကိုယ်တိုင်လာ ရောက်အပ်နှံတဲ့ကလေးတွေ ၊ မသိနားမလည်ခင် အရွယ်လေးမှာတောင် အဖြစ်ဆိုးကြုံနေရတဲ့ကလေးတွေကို သ နား စိတ် နဲ့ ထပ်မံ လက်ခံခဲ့တာကြောင့် ကလေးတွေ ထပ်တိုးလာခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီနေ့ မှာလည်း မဖြစ်မနေအခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ခိုင်မိသားစုဝင် နောက်တစ်ဦးထပ်တိုးခဲ့ကြောင်းကို ပရိသတ်ကြီးကို ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါ တယ် ။ အမေက နောက် ယောကျာင်္းယူသွားပြီး ဖခင်မှ အရက် မူးနေချိန် (၈)လ အရွယ် သမီးလေးအား ငွေ တစ်သိန်းဖြင့် လိုက်ရောင်းနေ ၍ အင်းစိန်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများမှ ကလေးနှင့် ဖခင်အား ထိန်းသိမ်းပီး ကျမ ဆီသို့ ဆက်သွယ် အပ်နှံ သဖြင့် သွားရောက် ခေါ်ယူ ခဲ့ ပါ တယ် ရှင်…. သမီးလေး အရိပ် တစ်ခု ရဖို့ အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က စောင့်ရှောက်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ပီတိဖြစ်ရသလို စိတ်လည်း မ ကောင်းဖြစ်ရပါတယ်….ဒီလို နဲ့ပဲ ကျမတို့ “ခိုင် ” ဂေဟာ မှာ မိသားစု ဝင် တစ်ဦး တိုးပြန်ပါပီရှင်… ဆိုပြီး မျှဝေလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိတ်သတ် ကြီး တို့ ရေ ။
သနား စရာအဖြစ် ဆိုးနဲ့ သမီးလေးကတော့ တနေ့တည်းမှာပဲ ရောင်းစားတဲ့ ဖခင်နဲ့ ကြုံခဲ့ရသလို အတိတ်ဘဝက ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေး ကြောင့် ကလေးတွေကို မေတ္တာပေးစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေလို ပရဟိတမင်းသမီးတစ်လက်ဆုံခဲ့ရတာတော့ အဆိုးထဲက အကောင်း လို့ ဆိုရမှာပါနော်။ နောက်ရှေ့ဆက်မယ့် ဘဝခရီးလမ်းမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ထပ်မကြုံရဘဲ အများနည်းတူ ဘဝကို အေးချမ်းပျော်ရွှင် စွာ ဖြတ်သန်း သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် သမီးလေးရေ.။အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သာယာ ပျော် ရွှင် တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း လိုက် ပါ တယ် နော် ။
မိဘမဲ့ က လေးပေါငျး မြားစှာ ကို ရငျအုပျ မကှာ စောငျ့ရှောကျ ပေးနေ တဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ နရောအခကျအခဲကွောငျ့ ကလေး(၃၀) ကြျော မှေးစားပွီးခြိနျ မှာ ပဲ ထပျပွီးလကျမခံတော့ဖို့ ဆုံးဖွတျထားပမေယျ့ လတျတလောကာလမှာတော့ ကိုဗဈကာလအခကျအခဲအမြိုးမြိုးနဲ့ မိဘ ကိုယျတိုငျလာ ရောကျအပျနှံတဲ့ကလေးတှေ ၊ မသိနားမလညျခငျ အရှယျလေးမှာတောငျ အဖွဈဆိုးကွုံနရေတဲ့ကလေးတှကေို သ နား စိတျ နဲ့ ထပျမံ လကျခံခဲ့တာကွောငျ့ ကလေးတှေ ထပျတိုးလာခဲ့ပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီနေ့ မှာလညျး မဖွဈမနအေခွအေနတေဈခုကွောငျ့ ခိုငျမိသားစုဝငျ နောကျတဈဦးထပျတိုးခဲ့ကွောငျးကို ပရိသတျကွီးကို ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါ တယျ ။ အမကေ နောကျ ယောကြာင်ျးယူသှားပွီး ဖခငျမှ အရကျ မူးနခြေိနျ (၈)လ အရှယျ သမီးလေးအား ငှေ တဈသိနျးဖွငျ့ လိုကျရောငျးနေ ၍ အငျးစိနျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေး မှူးမြားမှ ကလေးနှငျ့ ဖခငျအား ထိနျးသိမျးပီး ကမြ ဆီသို့ ဆကျသှယျ အပျနှံ သဖွငျ့ သှားရောကျ ချေါယူ ခဲ့ ပါ တယျ ရှငျ…. သမီးလေး အရိပျ တဈခု ရဖို့ အတှကျ တတျနိုငျတဲ့ဘကျက စောငျ့ရှောကျခှငျ့ရတဲ့ အတှကျ ပီတိဖွဈရသလို စိတျလညျး မ ကောငျးဖွဈရပါတယျ….ဒီလို နဲ့ပဲ ကမြတို့ “ခိုငျ ” ဂဟော မှာ မိသားစု ဝငျ တဈဦး တိုးပွနျပါပီရှငျ… ဆိုပွီး မြှဝလောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ပရိတျသတျ ကွီး တို့ ရေ ။
သနား စရာအဖွဈ ဆိုးနဲ့ သမီးလေးကတော့ တနတေ့ညျးမှာပဲ ရောငျးစားတဲ့ ဖခငျနဲ့ ကွုံခဲ့ရသလို အတိတျဘဝက ကောငျးမှုကုသိုလျကံလေး ကွောငျ့ ကလေးတှကေို မတ်ေတာပေးစောငျ့ရှောကျနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝလေို ပရဟိတမငျးသမီးတဈလကျဆုံခဲ့ရတာတော့ အဆိုးထဲက အကောငျး လို့ ဆိုရမှာပါနျော။ နောကျရှဆေ့ကျမယျ့ ဘဝခရီးလမျးမှာ ဒီလိုအဖွဈမြိုးတှေ ထပျမကွုံရဘဲ အမြားနညျးတူ ဘဝကို အေးခမျြးပြျောရှငျ စှာ ဖွတျသနျး သှားနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ သမီးလေးရေ.။အဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးလညျး သာယာ ပြျော ရှငျ တဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျး လိုကျ ပါ တယျ နျော ။
Previous post ကောက် ကြောင်း အလှ ပေါ်လင်အောင် လှလွန်း နေ တဲ့ မေပန်းချီ
Next post ကောက် ကြောင်း အလှ ပေါ်လွင်လွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ ချောကလျာ